I-B&b ethandekayo kufutshane neVenice
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguMattia
Indawo epholileyo kunye nentle yasemaphandleni kumaphandle aseVenice, kufutshane nesixeko esimangalisayo seVenice, Treviso kunye nePadua. Ukupheka okuqhelekileyo kwamaTaliyane kunye neencasa zayo zokwenyani nezemveli.Isidlo sakusasa esimnandi esenziwe ekhaya kunye nefama yezilwanyana!
Usapho lwaseDanesin luyavuya ukunamkela kwiAgriturismo yethu, ejikelezwe ngamasimi aluhlaza natyebileyo apho kulinywa khona intyatyambo eyaziwayo yasebusika yePo Valley: ekhula kade "Radicchio Rosso di Treviso IGP"
Amagumbi ethu amathandathu, apholile, mahle kwaye acocekile, axhotyiswe ngalo lonke uhlobo lokuthuthuzela, i-wi-fi yasimahla kunye nomabonakude.
Ekuseni isidlo sakusasa samazwe ngamazwe esinentabalala, esinencasa kunye nencasa yamazwe ngamazwe kunye neejam zethu ezenziwe ekhaya, iikeyiki, iibhiskithi, amaqanda, ibhekoni kunye neejusi ezintsha ziya kukuvumela ukuba usuku lwakho luqale ngokugqibeleleyo!
Umhlaba wethu, ilizwe laseVenice, lolona khetho lubalaseleyo kwindalo-, incasa elungileyo-, isiko lase-Italiya kunye nabathandi benkcubeko. Siyakumema ukuba uthathe uhambo olumnandi kwiindlela ezininzi zendalo kwaye ujonge iintyatyambo kunye nezilwanyana zasekhaya ngeenyawo okanye ngebhayisekile (onakho ngokupheleleyo simahla).
40 € ngobusuku ngomntu ngamnye
ABANTWANA: Isaphulelo sixhomekeke kwiminyaka yabo
* Indawo yokutyela yokupheka yasekhaya enokukhetha izitya eziqhelekileyo zesiko laseVenetian.
Kuvulwa ngoLwesine, ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo nangeCawa.
* UKhenketho lwePanoramic yelizwe laseVenetian ngenqwelo eyenziwe ngamaplanga ngetame yethu.
* Ungaqhagamshelana nathi ukuze uququzelele utyelelo olukhokelwayo kunye nohambo lwemini kwiindlela zokuhamba ezicetyiswe nguwe okanye thina ngokusekwe kwimfuno yakho. Siza kukukhokelela ekufumaneni umhlaba wethu phakathi kweNdalo, uBugcisa, ukupheka kunye neSiko.
Isikhundla sethu sesona silungileyo sokuqala uhambo lwakho lokufumana izixeko zobugcisa zaseVenice, Treviso kunye nePadua. Embindini welizwe laseVenetian yeyona ndawo ithuleyo yokuchitha iholide yakho!